Ikhaya elikhulu loSapho-Lufkin/Hudson Area - I-Airbnb
Ikhaya elikhulu loSapho-Lufkin/Hudson Area
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguBrenda
Ikhaya elikhulu losapho kwindawo efanelekileyo kwindawo yaseLufkin/Hudson. Amagumbi okulala amane, amagumbi okuhlambela amathathu agcweleyo, anekhitshi elivulekileyo / lokutyela / indawo yokuhlala, iveranda engasemva phezu kwethafa elihle elijongeka phantsi. Ikhitshi eligcweleyo kunye neendawo zokupaka ezigqunyiweyo ziyafumaneka. Malunga neekhilomitha ezintathu ukuya kwezintlanu ukusuka kwidolophu eyimbali yaseLufkin.
*Izilwanyana zasekhaya zivumelekile- Ukuya kuthi ga kwizilwanyana ezi-2 ubuninzi. Uya kuhlawuliswa i-$ 25 intlawulo yesilwanyana sasekhaya ngobusuku, ngesilwanyana ngasinye emva kokubhukisha. Nceda uquke ukuba zingaphi izilwanyana zasekhaya onazo xa ubhukisha ukuze ndikuhlawulele ngo-Airbnb*
Ikhaya elihle losapho ngezitena elibekwe ngaphandle kweLufkin kwindawo yaseHudson. Eli khaya likwikhaya lethu kwaye likwindawo yasemaphandleni ngelixa sisakufutshane nezinto eziluncedo. Yonwabela ikofu kwiveranda engasemva ejonge idlelo elihle. Yonwabela ukujonga inkwenkwezi, uyilo olubanzi, kunye nekhitshi elingana neTexas. Eli gumbi lokulala le-4 ligumbi lokuhlambela eli-3 lilungele ukubamba usapho lwakho okanye iminyhadala enje ngamatheko asezantsi e-bachelorette, imihla yokuzalwa, kunye neendibano zosapho.
4.87 · Izimvo eziyi-86
Ifakwe kwindawo yaseLufkin/Hudson kufutshane nezinto eziluncedo!
Retired Nurse. I enjoy camping, cooking, and spending time with my family.
Ifumaneka ebumelwaneni ukuba iyafuneka, iya kuhlonipha ubumfihlo bakho
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lufkin